Guurka Yurub iyo dhibaatooyinka Soomaalida ka haysta | Somaliska
Burburka ku yimaada qoysaska soomaliyeed ee nolol wadaaga ah maxaa keena? Dhibaatadu waxay ka imaaneysaa xaga hormuudayaasha reerka gaar ahaan hooyada iyo aabaha, metelan ka soo qaad waxaad arkaysaa hooyo haysata 4 caruur ah oo keligeed nool ninkeediina uu ku nool ayahay magaalo kale oo wadanka ka mid ah. Qoyskaas burburkiisa kama ay fekerin nolosha ubadkoodu sida ay noqonayso bal ka soo qaad maanta waxaad samaysay inaad guriga dumiso oo aad nolol kale raadsato laakiin kamaad fekerin noloshaad raadsanayso inay ka wacan tahay adoo ubadkaaga la noolaada . Nolosha guurka ee laguu sheegayaa waxaa ay tahay wada noolaanshaha qoyska gaar ahaan ninka iyo naagta isqaba ee ku midooba mustaqbalka . Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan kasoo baxay Stockhom, waxaan kula kulmay goobta basaska laga raaco ee shantaraalka ah gabadh ilaa 22jir ah oo haysata 3 caruura waraysi dheer aan la galay ayaa waxaa ay ii sheegtay inay ninkeedii oo ay mudo badan wada noolaayeen ay hada kala tageen taasoo markii aan hoos ugu dhaadhacay sheekada gunteeda ii sheegatay in ninkeedu khaladka reerka lagu dumiyey uu lahaa kadib markii ay isku afgaran waayeen arimo xaasaasi ah oo badanaaba qoysasku isku qabtaan gaar ahaan xaga kaadhka bangiga iyo isticmaalka lacagta caydha ah. Gabadhan waxaa kaloo ay ii sheegtay inaysan hada diyaar u ahayn inay guursato ninkale inkastoo ay sheegtay in maadaama wadan shisheeye ah la joogo ay fiican tahay rafiiqa aabe caruurta, hadana waxay ii sheegatay inay ubadkeeda korsanayso. Sidoo kale waxaan isna magaalada Göteborg kula kulmay aabe soomaliyeed oo degan meel ka baxsan magaalada oo haysta 4 caruura hooyadoodna ay ka maqan tahay taas oo uu iiga sheekeeyey inay sabab u tahay. "Xaaskayga anaa wadanka keenay markii ay mudo halsano ah joogtey ayaa looga sheekeeyey nolosha wadanka iyo in raga lagu shaqaysto iyadoo awelba fekrad ka qabtey sheekooyinkaas waxaana ay bilowdey hadalo aan munaasab ahayn oo nolosha qoyskeena duminaaya nasiib daro waxaan u dulqaataba sheekadii furniin ayey ka fursan weydey waanuna kala tagnay ma garanaayo ilaa iminka meelay aadey Norway ayaa lagu sheegaayey". Laakiin ninkan odayga ah waxaa uu aad u jeclaa inay xaaskiisu ku soo laabato isagoo qiray dhibta ay haweenku qabaan ee xaga ubadka aan ninku hayn karin ubadka taas oo uu ku tilmaamay hadaan xaaskaygii maanta tel ka hayn lahaa cid kale ma jeclaadeen hadana ayada ayaan sugayaa ilaahay idankii ayuu ku soo gabagebeeyey . Hadaba haday saas tahay qaar kale oo dadka ah ayaa aaminsan sida la xusuusto in guriga dadka soomaliyeed ee yurub joogaa uu burburkiisa hormuud u yahay dhowr arimood sida.. 1. ninka oo xaaskale ku guursada yurub taas oo sababta kalsooni darada reerkiisii hore oo duma iyadoon xaaskiisu raali ka hayan sharciga wadankuna uusan ogolayn in ninku laba naag wada qabo. 2.ninka ama gabadha is qaba oo isku seega dhanka balweda ama dhaqanka oo midkood ka leexdo wadadii saxda ahayd. 3. nin been u sheega gabadh isagoo xaas iyo caruur kaga yimid wadanka soomaaliya taasna markay runta timaado reerkii ku dumo halkaas. 4. iyo arimaha dhaqaalaha. Hadaba waxaa looga baahan yahay qoyskasta isqaba in la dhawro xaquuqda guriga iyo in laga feejignaado furniinka faraha badan ee ina hadheeyey taas oo qof kasta oo soomaali ah saamayn karta maadaama uu qoysku dumo nolol xumo ayaa meesha timaada. Raga waxaa looga baahan yahay inay dumarka u dulqaataan waaniyaan ku toosiyaan wadada toosan salaada baraan quraanka baraan maaaweeliyaan ilowsiiyaan wax kasta oo xumaan keenaaya ku eekaadaan gurigooda oo keliya wada tashi la samee xaaskaaga, waxaad gaadhi nolol wacane. Dumarka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada maqla seygiina ka fogaada wixii dhib u keenaya guurkiina u hogaansama ragiina xaquuqda ninkaaga garo hadaadan garanayna dhegeyso casharada diiniga ah ee ka hadlaaya xaquuqda qoyska. Aabe la aan faaiido malaha ka feker sidaad mar kasta ninkaaga u raaligelin lahayd adoo mar kasta oo uu kuu yimaado farxad kaaga tegaaya kuuguna imanaaya taas waa nasteexda dhismaha guriga qoyska. Dhamaanteenba ilaahay hayna waafajiyo towfiiqda ilahay idankii. Sidoo kale aqriso mowduuca: Sidee lagu gaaraa guur farxad leh? C/Samad Mohamed Siciid, Vilhelmina
Guurka Yurub iyo dhibaatooyinka Soomaalida ka haysta
Burburka ku yimaada qoysaska soomaliyeed ee nolol wadaaga ah maxaa keena? Dhibaatadu waxay ka imaaneysaa xaga hormuudayaasha reerka gaar ahaan hooyada iyo aabaha, metelan ka soo qaad waxaad arkaysaa hooyo haysata 4 caruur ah oo keligeed nool ninkeediina uu ku nool ayahay magaalo kale oo wadanka ka mid ah. Qoyskaas burburkiisa kama ay fekerin nolosha ubadkoodu sida ay noqonayso bal ka soo qaad maanta waxaad samaysay inaad guriga dumiso oo aad nolol kale raadsato laakiin kamaad fekerin noloshaad raadsanayso inay ka wacan tahay adoo ubadkaaga la noolaada .
Nolosha guurka ee laguu sheegayaa waxaa ay tahay wada noolaanshaha qoyska gaar ahaan ninka iyo naagta isqaba ee ku midooba mustaqbalka . Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan kasoo baxay Stockhom, waxaan kula kulmay goobta basaska laga raaco ee shantaraalka ah gabadh ilaa 22jir ah oo haysata 3 caruura waraysi dheer aan la galay ayaa waxaa ay ii sheegtay inay ninkeedii oo ay mudo badan wada noolaayeen ay hada kala tageen taasoo markii aan hoos ugu dhaadhacay sheekada gunteeda ii sheegatay in ninkeedu khaladka reerka lagu dumiyey uu lahaa kadib markii ay isku afgaran waayeen arimo xaasaasi ah oo badanaaba qoysasku isku qabtaan gaar ahaan xaga kaadhka bangiga iyo isticmaalka lacagta caydha ah.
Gabadhan waxaa kaloo ay ii sheegtay inaysan hada diyaar u ahayn inay guursato ninkale inkastoo ay sheegtay in maadaama wadan shisheeye ah la joogo ay fiican tahay rafiiqa aabe caruurta, hadana waxay ii sheegatay inay ubadkeeda korsanayso. Sidoo kale waxaan isna magaalada Göteborg kula kulmay aabe soomaliyeed oo degan meel ka baxsan magaalada oo haysta 4 caruura hooyadoodna ay ka maqan tahay taas oo uu iiga sheekeeyey inay sabab u tahay.
“Xaaskayga anaa wadanka keenay markii ay mudo halsano ah joogtey ayaa looga sheekeeyey nolosha wadanka iyo in raga lagu shaqaysto iyadoo awelba fekrad ka qabtey sheekooyinkaas waxaana ay bilowdey hadalo aan munaasab ahayn oo nolosha qoyskeena duminaaya nasiib daro waxaan u dulqaataba sheekadii furniin ayey ka fursan weydey waanuna kala tagnay ma garanaayo ilaa iminka meelay aadey Norway ayaa lagu sheegaayey”.
Laakiin ninkan odayga ah waxaa uu aad u jeclaa inay xaaskiisu ku soo laabato isagoo qiray dhibta ay haweenku qabaan ee xaga ubadka aan ninku hayn karin ubadka taas oo uu ku tilmaamay hadaan xaaskaygii maanta tel ka hayn lahaa cid kale ma jeclaadeen hadana ayada ayaan sugayaa ilaahay idankii ayuu ku soo gabagebeeyey .
Hadaba haday saas tahay qaar kale oo dadka ah ayaa aaminsan sida la xusuusto in guriga dadka soomaliyeed ee yurub joogaa uu burburkiisa hormuud u yahay dhowr arimood sida..
1. ninka oo xaaskale ku guursada yurub taas oo sababta kalsooni darada reerkiisii hore oo duma iyadoon xaaskiisu raali ka hayan sharciga wadankuna uusan ogolayn in ninku laba naag wada qabo.
2.ninka ama gabadha is qaba oo isku seega dhanka balweda ama dhaqanka oo midkood ka leexdo wadadii saxda ahayd.
3. nin been u sheega gabadh isagoo xaas iyo caruur kaga yimid wadanka soomaaliya taasna markay runta timaado reerkii ku dumo halkaas.
4. iyo arimaha dhaqaalaha.
Hadaba waxaa looga baahan yahay qoyskasta isqaba in la dhawro xaquuqda guriga iyo in laga feejignaado furniinka faraha badan ee ina hadheeyey taas oo qof kasta oo soomaali ah saamayn karta maadaama uu qoysku dumo nolol xumo ayaa meesha timaada.
Raga waxaa looga baahan yahay inay dumarka u dulqaataan waaniyaan ku toosiyaan wadada toosan salaada baraan quraanka baraan maaaweeliyaan ilowsiiyaan wax kasta oo xumaan keenaaya ku eekaadaan gurigooda oo keliya wada tashi la samee xaaskaaga, waxaad gaadhi nolol wacane.
Dumarka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada maqla seygiina ka fogaada wixii dhib u keenaya guurkiina u hogaansama ragiina xaquuqda ninkaaga garo hadaadan garanayna dhegeyso casharada diiniga ah ee ka hadlaaya xaquuqda qoyska. Aabe la aan faaiido malaha ka feker sidaad mar kasta ninkaaga u raaligelin lahayd adoo mar kasta oo uu kuu yimaado farxad kaaga tegaaya kuuguna imanaaya taas waa nasteexda dhismaha guriga qoyska.
Dhamaanteenba ilaahay hayna waafajiyo towfiiqda ilahay idankii.
Sidoo kale aqriso mowduuca: Sidee lagu gaaraa guur farxad leh?
C/Samad Mohamed Siciid, Vilhelmina
“Islaamka ha laga mamnuuco Sweden”